KU HAGAAJI NAFTAADA AKHLAAQ
Ku hagaaji naftaada Akhlaaq wanaagsan, marjiceedana ha noqdo sidaas, ku xooji naftaada Akhaalada wanaagsan si ay u toosto.
LABA QOF AYAA DADKA KAA FAHMI KARTA
Laba Qof wax aan ahayn dadka kaama fahmi karaan, labadaas qofna waxaa jira laba Duruuf oo fududeysa in ay ku fahmaan.
1 Qof ku sugan ama soo arkay xaaladdaada oo kale.
2 qof ku jecel oo doonayn dhaawacaaga iyo xanuunsashadaada.
Labadaas qof mar walba u dhawow oo raadso, maxaa yeelay, waa labada kaliya ee noloshaada kula fahmi kara, kuna caawin kara.
DANEE DAREENKA QOFKA
In aad danayso hadalka qofka waxaa ka qiima badan in aad danayso Dareenka Qofka. Xaqiiqda qofka mar walba waxaa laga aqristaa dareenkiisa, hadalka qofka ma ahan mid ka tarjumaya dhabta qofkaas.
Waxaa la yaab leh in aan ku noolnahay Duni ay Dadka u danayn badan yihiin Hadalka, dareenka qofkase uusan macna ugu fadhin!!!!
CEEBTAADA WAA IN AAD GARATAA
Ceebtaada jiritaankeeda waa in aad garataa, kadibna ku dadaashaa sidii aad u hagaajin lahayd.
In aad inkirto ceebtaada waxaa kaaga khayr badan in aad garato oo qirato kadibna aad hagaajiso.
Qofka mar walba waxa uu yahay ama uu leeyahay inkiraa waa qof aan dhabta ku noolayn, inta badan aad garataa daciifnaantaada iyo xumahaaga, waa inta badan ay kuu siyaaddo Awood iyo Wanaag aad naftaada ku samayso.
Hadaba, ha dhibsan oo ha inkirin ceebtaada, ma jiro Qof aan Ceeb lahayn dunidan, la noolow ceebtaada, dibna u hagaaji.
HA IS CAQABADAYN
Naftaada ha galin Caqabad aysan mudnayn, hana isku dayin Farxad galinta qof walba adiga oo taada luminaya in ayaga ay farxad helaan darteed.
Miyaadan ogayn in naftaada ay u baahantahay, Dhiiranaan, Xanaanayn, iyo farxadgalinba?
cadowgaaga wax ka farxiya faan kuuma noqdaan
Nin in aad disho kaga qanaaco badan in uu ku dilo, dilkiisa oo aad ku faanto waxba kuuma soo kordhinayso, xaqiiqda ayaa waxay tahay in waxaad ku faanayso ay farxaddiisa tahay, cadowgaaga wax ka farxiyana faan kuuma noqdaan.
QOF AYAA MACIINSADA AAMUSNAANTA
Qof ayaa maciinsada aamusanaanta si uusan u dhaawicin dadka kale, qof kalena wuxuu u maciinsadaa Aamusnaanta Xanuun haya dartiis, oo hadduu hadlo kusii kordhaya.
Caafimaadka marka la haysto qiimahiisa lama dareemo ee marka la waayo ayaa la dareemaa, sidaas si la mid ah wax walba.
QOF WALBA OO AAMUSA
Qof walba oo aamuso micnaheeda maahan in uusan hadli karin, sababta uu u aamusay is waydiinteeda ayaa ka muhiimsan ku mashquulsanaanta waxa uu dhihi lahaa.
XORNIMADA MA AHAN ………
Xornimada ma ahan in xumaan iyo dhib lagugu hayay lagaa dulqaado oo kaliya, ee waa in aad dib u heshaa Xaq kaa maqnaa, adiga oo garansan waliba qiimaha xaqaaga, markaas ayaa u dabaal dagi kartaa Xornimo.
Maalmuhu shaqsiyadda dadka waxba kama baddalaan ee waxay muujiyaan dhabtooda, qof walba oo is qarshaa maalin ayuu soo bandhigaa waqtigu shaqsiyaddiisa dhabta ah.
Qof aqoontiisa ha ka shallaayin waligaa, maxaa yeelay marnaba kuma qasaartid barashada dadka.
Dadka wanaagsan naftaada wey farxad galiyaan
Kuwa xunna wey ku imtixaamaan
Kuwa ugu liitana Cashar ayey ku siiyaan.
HA U ISTICMAALIN BUSHIMAHAAGA
Ha u isticmaalin bushimahaaga waxa aan labadan ahayn
1 in aad hadal fiican ku dhahayso
2 in aad Baasha (Shumis) macaan badan oo Xalaal ah ku samaynayso
SADDEXDAN ILA GARO
In la kulmo waa billow wanaagsan
In la iskaashadana waa horumarkeena
In la wada shaqayana waa guusheena
SUMADDAYDA WAA SOOMAALI
Anigu waayadan Summad la’aan ayaan ahay, in aan Soomaali ahayse Summaddeeda waa mid aan iga tirtirmayn, taariikhiihii horena waan iska hilmaamay, maadaama aysan ahayn, dhabta maanta jirta.
SANKU NEEFLE DIID!!!!!!
Sanku neefluhuu diid, in uu sifada Alle mideeyo!
Sanku neefluhu diid, in uu isku raaco Diin mid ah.
Sanku neefluhu diid, in uu isku raaco Maamul mid ah.
Sanku neefluhu wax uu isku raacsan yahay waxaa ka jira Geerida (Dhimashada)